पूँजी बजार (Capital market) भनेको ? - सरकारी जागिर
November 25, 2018 July 24, 2019 Sarakari JagirLeaveaComment on पूँजी बजार (Capital market) भनेको ?
पूँजी बजार भनेको ?
पूँजी बजार भनेको त्यस्तो बजार हो जहाँ सेयर, डिवेन्चर, वोन्ड,म्युचुअल फण्ड, ट्रेजरी बिल आदि जस्ता धितोपत्र तथा ऋणपत्रको खरिद बिक्री हुन्छ । पूँजी बजारको माध्यमबाट विभिन्न कम्पनी तथा सरकारले धितोपत्र र ऋणपत्रको बिक्री गरि कार्यसंचालनका लागि पूँजी संकलन गर्दछन् ।
पूँजी बजारमा पूँजी उपलब्ध गराउने पक्ष (धितोपत्र तथा ऋणपत्र खरिद गर्ने पक्ष) लाई लगानीकर्ता भनिन्छ । यस्ता लगानीकर्ता व्यक्तिगत वा संस्थागत दुवै हुन सक्दछन् । यस्ता लगानिकर्ताले पूँजी बजारमा लागानी गरेबापत ब्याज तथा लाभाशं प्राप्त गर्दछन् ।
पूँजी बजार दुई प्रकारको हुन्छ ।
प्राथमिक बजार : प्राथमीक बजार भनेको त्यस्तो बजार हो जहाँ कम्पनिले सिधै लगानीकर्तालाई धितोपत्र आवहान गर्दछ । प्राथमिक बजारमा कम्पनीहरुले IPO (Initial public offering) र FPO (Further public offering) जारी गरि पूँजी संकलन गर्दछन् ।
द्वितीय बजार : यस्तो बजारमा धितोपत्र सिधै कम्पनिले जारी नगरी कुनै ब्रोकरद्वारा पहिले नै जारि गरिएको धितोपत्र खरिदबिक्री गरिन्छ । धितोपत्र द्वितीय बजारमा खरिद बिक्री गर्नका लागि कम्पनिले उक्त धितोपत्र NEPSE(Nepal stock exchange) मा सुचिकृत गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा धितोपत्र खरिद बिक्रीको लागि एक मात्र बजार nepal stock exchange हो ।
Nepal Stock Exchange, in short NEPSE, is established under the company act, operating under Securities Exchange Act, 1983.
The basic objective of NEPSE is to impart free marketability and liquidity to the government and corporate securities by facilitating transactions in its trading floor through member, market intermediaries, such as broker, market makers etc. NEPSE opened its trading floor on 13th January 1994.
Government of Nepal, Nepal Rastra Bank, Nepal Industrial Development corporation and members are the shareholders of NEPSE.
The History of Securities Market in Nepal